More 777 Ukwu
ajụjụ More 777 Ukwu
1 afọ 9 ọnwa gara aga #631 by kevrick25
M hụrụ n'anya 777 mega abịa ị na-etinye ọnụ maka fsx, id ịhụnanya ịhụ ọhụrụ ngwugwu maka 777 ebe unu naanị mere 777-200LR. A mkpọ maka -200ER na -300ER ga-adị mma. Ive hụrụ ngwugwu n'ihi na ndị a n'ebe ọzọ ma ha VC bụ Mbido nnọọ na okwu nke isi ejikọ.
Olileanya na ị na-ike anya n'ime na.
1 afọ 9 ọnwa gara aga #636 by Gh0stRider203
Ọ bụghị ike na gbanwee na-VC ... ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ, ya mere, m na-anụ akpa ọchị m nwetara a 737 na a kama mma kokpiiti na mma VC (ezie na m na-adịghị eji ya akpa ọchị) Ma ọ bụrụ na m na aghaghị m, m 'd gbanwee si VC na ndị ọzọ 2 engine nnụnụ na na otu.
1 afọ 9 ọnwa gara aga #637 by kevrick25
ọma ya bụghị VC na kwesịrị swapping si ezie na i mara ya abụghị ike, ive mere ya nile di iche iche nke freeware. ya dị nnọọ otú ndị ọzọ na-esetịpụrụ ogwe-emeghe.
Ka ihe atụ, 777 Rikoooo na-eme ka na-eji niile mgbanwe + # n'ịgwa na-emeghe dị mkpa ogwe ka efefe, fmc wdg ndị ọzọ, na-eme ndokwa ka ha na-emeghe posky util, na-eme ihe nd / pfd ibu, wdg wdg na Na-enye ọ bụla ohere na-efefe n'elu panel na-atụgharị stof na-eme ka ndị VC ya onwe ya bụ na a kpaara ihe i nwere ike pịa. Ma, ihe dị mfe gbanwee ha panel folder maka rikoooo si eme ka ọ na-arụ ọrụ ọma.
Plus, i na-eche rikoooo ga-eme mma na mbukota ha na ọ na-agbakwụnye ọzọ na collection
1 afọ 9 ọnwa gara aga #638 by Gh0stRider203
Echere m na ị nwere ike ịgbanwe na panel.cfg
1 afọ 9 ọnwa gara aga #639 by Gh0stRider203
M maara na m na-na na na-dezie panel.cfg ịgbakwunye stof, dị ka a GPS. M na-adịghị ahụ ihe mere i nwere ike ọ bụghị naanị re-ndokwa iji na ihe bụghị ...
1 afọ 9 ọnwa gara aga #641 by kevrick25
M na-ama ihe niile, achọrọ m bịara na-atụ aro na-eme ka ndị ọzọ 777 Ukwu, ma ọ bụ a mkpọ nke nwere 200 na 300 na ya kama naanị 200LR naanị. Dị nnọọ otú ahụ ya A330 mkpọ nwere ike ibu A332 na A333 si
1 afọ 9 ọnwa gara aga #642 by CSTT-CYYZ
M na-dị ka a mkpọ n-2 na ikuku France ọhụrụ na agba na ikuku Canada, KLM ọhụrụ agba, United ụgbọ, JAL, ana, Delta, Air Austral, LH ibu, B777-300ER klm - ikuku Canada Emirates - Egyptair - Tam-swiss -BA - Air transat ficitve. Daalụ
Oge ike page: 0.265 sekọnd